Xildhibaanada DFKGS Oo Dib Ugu Soo Noqday Isqabqabsigii Ka Dhanka Ahaa Madaxda – SBC
Xildhibaanada DFKGS Oo Dib Ugu Soo Noqday Isqabqabsigii Ka Dhanka Ahaa Madaxda
Posted by Webmaster on December 14, 2011 Comments
In badan oo ka mid ah xildhibaanada DFKMG ayaa maanta sheegay in xilkii gudoominimo ay ka qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadam oo ay sheegeen in ay u cuskadeen qodobka 38 aad ee axdiga FKMGS oo waliba ka kooban 3 farqadood oo ajandihiisa uu yahay howl socodsiinta baarlamaanka kuwaasoo Tiradooda ku sheegay xildhibaanada xilka qaadista sameeyay ku dhowaad 280 xildhibaan.
Xildhibaan Cumar Islow Maxed oo la hadlayay warbaahinta SBC International ayaa sheegay in xilka qaadista ay sameeyeen ay tahay mid ku timid markii uu gudan waayay shaqooyinkii loo dhiibtay iyo waliba isaga oo ka dhaga adeegay in uu qaban waayay kalfadhiyadii mudanayaasha baarlamaanka sida uu hadalka u dhigay Xildhibaan Islow.
Waxaana sidoo kale Xildhibaan Cumar uu sheegay in loo baahan yahay in sharciga wax lagu maamulo isagoo taasi ku daray in lagu dhaqan galiyo in xildhibaanada laga soo xulo xubinta shirgudoonka oo uu sheegay in markaasi ay isku raaceen Xildhibaan Madoobe Nuunow.
Mar aanu wax ka weydiinay waxa ay ka yeelayaan heshiiskii Kambala ee xarunta dalka Uganda oo ku aadanaa in inta ka dhiman doorashada guud ama sanadka loogu daray Jiritaanka dowlada ayaa uu ku tilmaamay in taasi aysan ahayn sharciga u yaala baarlamaanka DFKGS.
Dhanka kale xildhibanaano kale oo ay ka mid yihiin Xildhibaan Cabdi wali Ibraahin Muudeey oo ah ku xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka iyo waliba Xildhibaanad Khadiijo Maxed Ibraahin oo iyaduna la hadashay warbahinta SBC ayaa xilka qaadistaas ku sheegay wax lagu qoslo oo aan sharciga waafaqsanayn xidhibaanadaas la sheegayna ay yihiin kuwo aan ogolayn sharciga iyo dowladnimada.
Xildhibaanad Khadiija Maxed ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in xildhibaanada kulmay ay ahaayeen kuwii shalay is hor istaaga ku sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan xilli uu ka dhoofi lahaa muqdisho balse uma suurta galin waxaana ay intaasi ku dartay in shacabka ay ogaadaan cida qaranimada diidan.
Isku soo wada duuboo arimahan ayaa ah kuwo lagu yiqiinay mudanayaasha baarlamaanka DKGS taasoo dib u soo noqotay isqabqabsigii ka dhanka ahaa madaxda iyo Xildhibaanada waxaana murankan iyo isqabqabsigan ay ku soo beegmaysaa xilli shirkii garoowe ee soomaalida uu furmi doono maalmo ka dib.